China CY-9 (Washing rack rack) abakhiqizi nabaphakeli | UJialong
1, Idizayini eyingqayizivele yesikebhe esiseyili inyusa indawo yokugcina ngaphandle kokuthinta ubuhle, futhi yenze impilo ibe yintsha.
2, 25kg wokuthwala umthwalo oqinile, akulula ukuwunyakazisa, uzinze ngokwengeziwe, akukho ukusonteka.
3, I-clapboard enezingqimba ezintathu ilula kakhulu ukuyifaka futhi uyithathe, okwenza isikhala sihlakazeke sibe yinsakavukela, okwenza igumbi likhanye futhi likhanye ngokuzumayo.
4, Sinezinyawo ezingaguquguquki ezingaguquguquki ezansi kweshalofu, ezingalungisa ukuphakama ukugwema izinga elingalingani lomhlabathi, futhi ukwakheka okungasheleleki nakho ukuqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende lapho usebenzisa ishalofu.
5, Nge-patch eqinile eqinile, qinisa okuqinile, unganyakazisi, ukuphindwe kabili ukuthula kwengqondo. Akusekho isidingo sokushaya izimbobo, unamathele ekwakhiweni komhlaba okulula kakhulu.
Qhathanisa:Uma kuqhathaniswa namanye amashalofu, ikhwalithi yethu ingcono, ilula futhi kulula ukuyihambisa. Uma kuqhathaniswa namashalofu epulasitiki aqine ngokwengeziwe, futhi isikhawu esiphakathi kwesendlalelo ngasinye siyakwazi ukubeka phansi okokuhlanza izingubo ngeke kube nento ephakeme kakhulu ukubeka amahloni. Ukugcinwa kwansuku zonke nakho kulula kakhulu, vele usule ngethawula. Ngoba sisebenzisa upende wokubhaka, ukulimala komzimba womuntu kuncane akulula ukugqwala.
Imikhiqizo yethu ifaneleka kakhulu kumakhasimende anamafulethi amancane, hhayi amahle kuphela kodwa futhi enza ikhaya licoceke futhi licoceke.
Ngemuva Kokuthengisa:Sinamavidiyo wokufundisa ukufakwa, uma unemibuzo ungaxhumana nathi nge-imeyili futhi sizothumela uchwepheshe ukuthi axhumane nawe ngokushesha okukhulu ukuxazulula inkinga. Uma uneziphakamiso mayelana nemikhiqizo yethu, wamukelekile kakhulu ukusibuza, ngokuqinisekile sizokulalela futhi sithuthukise.
Langaphambilini I-CY-10 (ukwesekwa kwezingubo eziphansi kuya phezulu)
Olandelayo: I-CY-8 (Indawo yokugezela yangasese)
Izingubo zokugqoka ezimnyama
Izingubo Ezomisa Rack
Izingubo Ezinkulu Zokumisa Rack
Izingubo Eziqinile Zokumisa Rack